Inkampu kwiLizwe, i-20 min. ukusuka eNotre Dame
Ikharaveni sinombuki zindwendwe onguRhonda
Yiza usityelele! Inkampu yethu yeenyawo ezingama-24, elala ukuya kuthi ga kwi-8 abantu, imisiwe kwaye ilungele ukuba ukonwabele. Sibeke oomatrasi aba-2 abalingana ne-Queen ye-camper kunye nee-intshi ezi-4 zogwebu lwenkumbulo ukwenza ubuthongo obumnandi. Iibhedi ezimbini ezingaphezulu zinokudalwa kwi-sofa yokukhupha kunye ne-dinette. Ndwendwela iinkukhu kwi-coop, yenza i-s'mores phezu komlilo, okanye uzipholise nje kwizitulo zengca phantsi kwe-awning. Inkampu ipakishwe apho uya kubona izilwanyana zasendle njengoko uyonwabela ikofu yakho yasekuseni.
Le nkampu ixhotyiswe ngefriji, imicrowave, stovetop, oven, toaster, kunye nembiza yekofu. Izitya, izinto zokupheka, iimveliso zephepha, izixhobo zokucoca ezisisiseko, kunye neelinen zonke zibonelelwe.
Ngelixa inkampu iyiyunithi eyahlukileyo ngokupheleleyo enegumbi lokuhlambela kunye nekhitshi, le yipropathi ekwabelwana ngayo kunye neyadi. Sicela ukuba uyihloniphe ngokuyeka ukusela utywala kwipropati. Iiyure zokuzola ziqala ngentsimbi yesithoba. ukuya ku7am.
Akukho mabonakude kwiyunithi, kodwa siya kukubonelela ngofikelelo lweWiFi ngexesha lokuhlala kwakho.
Sifuna ukuhlala kwakho kube kuhle!
Norte Dame imizuzu engama-20
Shipshewana imizuzu engama-40
Chicago 2 iiyure
Umbuki zindwendwe ngu- Rhonda
Ngokuqhelekileyo siya kufumaneka ukususela ngentsimbi yesi-7 ukuya kweyesi-9 ebusuku. (ngomyalezo obhaliweyo) ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho.